Apple Inoburitsa Yekutanga Beta yewatchOS 3.1.3 yeVagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa beta yekutanga yewatchOS 3.1.3 yevagadziri
Apple ichangobva kuburitsa yekutanga beta vhezheni kune vanogadzira vhezheni iyo inofanirwa kusvika kune vashandisi veiyi smart smart munguva pfupi, iyo watchOS 3.1.3 vhezheni. Zvinosetsa izvo kusvikira nhasi hatisati tine vhezheni yepamutemo mushure medambudziko neshanduro yakaburitswa tobva tabvisa 3.1.1.
Ivo veCupertino vanoita kunge vasina chinangwa chekuburitsa chero vhezheni yesisitimu inoshanda kunze kweiyo beta kune vanogadzira uye izvi zvinowedzera kusvika gore rinouya kana tikateerera runyerekupe. Hatina zvinyorwa zvekufamba zvine chekuita neshanduro yepamutemo, saka isu tichafanirwa kumirira kuita kwaApple kuchinetso.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti havazi vese vashandisi vane kukundikana muApple Watch yavo, vanoverengeka vakatoyambira kuti iyo yekuvandudza yakaitwa pasina matambudziko asi vamwe vazhinji vakasara vaine "vakafa" wachi. Apple haina kutaura zviri pamutemo nezvazvo ichisiya parutivi kuti vakabvisa vhezheni yacho.
Zvino nekuuya kweiyi nyowani beta vhezheni zvishoma zvinozivikanwa shanduko zvinotarisirwa maererano nekushanda kwewachi uye nezvimwe, asi mune ino kesi kana tichizoda Apple kuti zvigadziriso zvemakanganiso uye madiki madhiragi ndeechokwadi uye isu hatiite ndine matambudziko munguva yekuvandudza. Parizvino, iyi yekutanga beta vhezheni yatove mumawoko evakagadziri kuti vagone kuiongorora uye vawane zvikanganiso. Zvichakadaro vashandisi vazhinji vachiri pawatchOS 3.1 pamawatch edu vakamirira vhezheni itsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa beta yekutanga yewatchOS 3.1.3 yevagadziri
A 2016 MacBook Pro isina Kubata Bhara ine dhisikaundi ye100 euros
Apple inowedzera huwandu hwemabhangi anotsigira Apple Pay muChina